အေးတိအေးစက်သွေးအေးသတ္တ၀ါကြီးကိုချစ်သူတော်ထားရတဲ့ပျိုမေတို့သိစေဖို့ – Trend.com.mm
Posted on June 3, 2018 May 30, 2018 by Shun Lei Phyo
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေရှိတဲ့လောကကြီးထဲမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ပုံစံချင်းမတူနိုင်ကြပါဘူးလေ။ ကိုယ့်ချစ်ရသူက အေးတိအေးစက်နေတတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်
အေးတိအေးစက်နေတတ်တဲ့ကောင်လေးတွေဟာ တော်ရုံချစ်တတ်ကြိုက်တတ်ကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို တော်ရုံကိုမချစ်တတ်မကြိုက်တတ်တဲ့ကြားကသင့်ကိုချစ်နေတယ်သင့်ချစ်သူအဖြစ်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။ သင့်ကိုတကယ်ချစ်လိုိ့သာချစ်ရေးဆိုခဲ့တာနေမှာပါ။ ဆိုတော့ ဒီလိုလူမျိုးက ရည်းစားရှိလျက်နဲ့တစ်ခြားသူကိုချစ်ကြိုက်ဖို့ဖောက်ပြန်ဖိုကဆိုတာ ဝေလာဝေး တာမလို့ သစ္စာဖောက်မှာတော့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
သူတို့တွေအတွက်လူတစ်ယောက်ကိုချော့ရတာဟာ တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ မာနခံပြီးတင်းထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ အေးဆေးနေတတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်တော်ရုံ လူတွေနဲ့ဆင်ပြေအောင်ပေါင်းပြီးချော့ဖို့ခဲယဉ်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့စိတ်ဆိုးဒဏ်တွေ စိတ်ကောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင်သူတို့အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်တတ်တာမလို့အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်မကောက်ပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတာကိုပိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အလိုက်မသိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ ။ ကိုယ့်ကောင်မလေးက ကြည်ကြည်နူးနူးစကားတွေကြားချင်လို့ မေးတိုင်းပြောတိုင်း အမှန်တိုင်း မြင်သလို
စာမဖွဲ့ပဲပြောတတ်တာမျိုးတွေကြောင့်ကောင်မလေးရဲ့ရင်ထဲမှာသူ့အတွက်ငါက ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာစေတဲ့အထိပါပဲ။ဒီလိုချစ်သူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပျိုမေတွေဟာသူငါ့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်၊ သူ့ရဲ့အေးစက်တဲ့ အကျင့်ကြီး သွေးအေးပြီး စာမဖွဲ့တတ်တဲ့အကျင့်ကြီးကြောင့်ပါလားဆိုပြီး သိပ်ခံစားမနေပဲ ကြိုးစားနားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။
ချစ်တာကိုပါးစပ်ကနေ တဖွဖွပြောတတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ကောင်မလေးရဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးချင်တတ်ကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့်Romantic မဆန်ပင်မဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တာကိုသိထားပြီး နားလည်းပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်သိပ်ကိုအူယားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ်စိတ်တိုနေလို့တိုနေမှန်းမသိကိုယ်ရွဲ့ပြောလို့ပြောမှန်းမသိပဲ. ဒါပဲဆိုရင် ချက်ချင်းဖုန်းချပေးလိုက်တာမျိုး၊ထွက်သွားဆိုရင်ချက်ချင်းထွက်သွားတာမျိုး၊ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေပါတယ်လို့ပေါ်တင်မပြောမချင်းစိတ်ဆိုးမှန်းမသိတာမျိုး ဒီလိုကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုအတွင်းထိမမြင်တတ်ကြတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုခပ်အေးအေးသွေးအေးသတ္တ၀ါကြီးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေရပြီဆိုရင် ကိုယ်ကလည်းသူမှသူပဲဆိုရင်တော့ သူရဲ့ဒီလိုအလိုက်မသိတတ်တဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နော်။
လူအမြိုးမြိုးစိတျအထှထှေရှေိတဲ့လောကကွီးထဲမှာ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကတော့ပုံစံခငျြးမတူနိုငျကွပါဘူးလေ။ ကိုယျ့ခဈြရသူက အေးတိအေးစကျနတေတျတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျ
အေးတိအေးစကျနတေတျတဲ့ကောငျလေးတှဟော တျောရုံခဈြတတျကွိုကျတတျကွသူတှမေဟုတျပါဘူး။ ဒီလို တျောရုံကိုမခဈြတတျမကွိုကျတတျတဲ့ကွားကသငျ့ကိုခဈြနတေယျသငျ့ခဈြသူအဖွဈရှိနပွေီဆိုရငျတော့ ဂုဏျယူသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ကိုတကယျခဈြလို့သာခဈြရေးဆိုခဲ့တာနမှောပါ။ ဆိုတော့ ဒီလိုလူမြိုးက ရညျးစားရှိလကျြနဲ့တဈခွားသူကိုခဈြကွိုကျဖို့ဖောကျပွနျဖိုကဆိုတာ ဝလောဝေး တာမလို့ သစ်စာဖောကျမှာတော့စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။
သူတို့တှအေတှကျလူတဈယောကျကိုခြော့ရတာဟာ တကယျကိုခကျခဲတဲ့အရာပါ။ မာနခံပွီးတငျးထားတာမဟုတျပမေဲ့ အေးဆေးနတေတျတဲ့သဘာဝကွောငျ့တျောရုံ လူတှနေဲ့ဆငျပွအေောငျပေါငျးပွီးခြော့ဖို့ခဲယဉျးတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့စိတျဆိုးဒဏျတှေ စိတျကောကျမှုတှနေဲ့ပတျသတျလာရငျသူတို့အတှကျစိတျရှုပျစရာဖွဈတတျတာမလို့အတတျနိုငျဆုံးစိတျမကောကျပဲခဈြခဈြခငျခငျနတောကိုပိုသဘောကတြတျကွပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ အလိုကျမသိဘူးလို့လညျးပွောလို့ရတဲ့အရာတဈခုပါပဲ ။ ကိုယျ့ကောငျမလေးက ကွညျကွညျနူးနူးစကားတှကွေားခငျြလို့ မေးတိုငျးပွောတိုငျး အမှနျတိုငျး မွငျသလို
စာမဖှဲ့ပဲပွောတတျတာမြိုးတှကွေောငျ့ကောငျမလေးရဲ့ရငျထဲမှာသူ့အတှကျငါက ဘာမှမဟုတျဘူးဆိုတဲ့အတှေးမြိုးတှဝေငျလာစတေဲ့အထိပါပဲ။ဒီလိုခဈြသူမြိုးကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ပြိုမတှေဟောသူငါ့ကိုမခဈြလို့မဟုတျ၊ သူ့ရဲ့အေးစကျတဲ့ အကငျြ့ကွီး သှေးအေးပွီး စာမဖှဲ့တတျတဲ့အကငျြ့ကွီးကွောငျ့ပါလားဆိုပွီး သိပျခံစားမနပေဲ ကွိုးစားနားလညျပေးသငျ့ပါတယျ။
ခဈြတာကိုပါးစပျကနေ တဖှဖှပွောတတျတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျ့ကောငျမလေးရဲ့တကယျလိုအပျနတေဲ့အရာတှကေိုသာဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြတတျကွသူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့Romantic မဆနျပငျမဲ့လညျး ကိုယျ့ကိုတကယျခဈြတာကိုသိထားပွီး နားလညျးပေးတတျဖို့လိုပါတယျ။
မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျသိပျကိုအူယားစရာကောငျးတဲ့အခကျြပါပဲ။ ကိုယျ့ခဈြသူကကိုယျစိတျတိုနလေို့တိုနမှေနျးမသိကိုယျရှဲ့ပွောလို့ပွောမှနျးမသိပဲ. ဒါပဲဆိုရငျ ခကျြခငျြးဖုနျးခပြေးလိုကျတာမြိုး၊ထှကျသှားဆိုရငျခကျြခငျြးထှကျသှားတာမြိုး၊ကိုယျစိတျဆိုးနပေါတယျလို့ပျေါတငျမပွောမခငျြးစိတျဆိုးမှနျးမသိတာမြိုး ဒီလိုကိုယျရဲ့စိတျကိုအတှငျးထိမမွငျတတျကွတာမြိုးတှရှေိတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဒီလိုခပျအေးအေးသှေးအေးသတ်တဝါကွီးနဲ့ခဈြသူဖွဈနရေပွီဆိုရငျ ကိုယျကလညျးသူမှသူပဲဆိုရငျတော့ သူရဲ့ဒီလိုအလိုကျမသိတတျတဲ့အခကျြလေးတှကေိုလညျး နားလညျပေးနိုငျဖို့လိုပါတယျနျော။